Imboni Yendawo Yokuhlanza - Abakhiqizi Bendawo Yokuhlanza Yase-China, Abahlinzeki
I-Fume Hood Series yokukhipha Amagesi Ayingozi
I-Fume hood iyithuluzi elivamile laselabhorethri elisetshenziswa kulabhorethri edinga ukukhipha amagesi ayingozi, futhi idinga ukuhlanzwa futhi ikhishwe phakathi nokuhlolwa.
Uhlobo Lwethebula I-Ultra-clean Workbench Series
Ibhentshi elihlanzekile liwuhlobo lwemishini yokuhlanza ingxenye esetshenziswa endaweni ehlanzekile.Ukusetshenziswa okulula, isakhiwo esilula nokusebenza kahle okuphezulu.Isetshenziswa kakhulu kuma-electronics, i-instrumentation, ikhemisi, i-optics, isiko lezicubu zezitshalo, izikhungo zocwaningo lwesayensi namalabhorethri, njll.
I-Vertical Flow Ultra-clean Workbench Series
Evundlile futhi Iqondile Dual-purpose Ultra-clean Workbench Series
Umklamo owenziwe umuntu ucabangela ngokugcwele izidingo zangempela zabasebenzisi.Ngokusho kwesakhiwo esilinganisiwe se-counterweight, umnyango wengilazi oshelelayo wefasitela lokusebenza ungabekwa ngokuzenzakalelayo, okwenza ukuhlolwa kube lula futhi kube lula.
I-Biological Safety Cabinet Series Isigamu Exhaust
Ikhabhinethi yokuphepha kwebhayoloji (i-BSC) iwuhlobo lwebhokisi lokuhlanza umoya idivayisi yokuphepha ye-negative pressure engavimbela izinhlayiya ezithile zebhayoloji eziyingozi noma ezingaziwa ekubhubhiseni ama-aerosol phakathi nomsebenzi wokuhlola.isetshenziswa kabanzi ocwaningweni lwesayensi, ekufundiseni, ekuhlolweni komtholampilo njll.
I-Biological Safety Cabinet Series Series Exhaust Egcwele
Isetshenziswa kakhulu ocwaningweni lwesayensi, ekufundiseni, ekuhloleni emitholampilo nasekukhiqizeni emikhakheni ye-microbiology, i-biomedicine, ubunjiniyela bezakhi zofuzo, imikhiqizo yebhayoloji, njll. Iyisisetshenziswa esiyisisekelo sokuvikela ukuphepha kusithiyo sokuvikela sezinga lokuqala ku-laboratory biosafety.